विवाहसँग जोडिएका ७ गोप्य कुरा !! – jagritikhabar.com
७. विवाहको अर्थ समर्पण नभई क्षमा होःविवाह पछिको केहि महिना निकै चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ । विशेष गरि मागी विवाह गरेका महिलाहरुका लागि । आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्विकार गर्नुपर्ने सिकाउनुपर्ने हुन्छ जसले तपाईंको छोरीले आफ्ना श्रीमानलाई सजिलै सँग अपनाउन सक्छिन् । आफ्नो कमी कमजोरी थाहा पाएकी तपाईंकी छोरीले कुनै पनि मानिस शत प्रतिशत गुणी हुन सक्दैन भन्ने बुझिसकेकी हुन्छिन् ।